पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह लकडाउनमा छाेरीहरूसँग टिकटकमा नाचेर रमाउँदै गरेकाे अर्काे भिडियो भाइरल (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह लकडाउनमा छाेरीहरूसँग टिकटकमा नाचेर रमाउँदै गरेकाे अर्काे भिडियो भाइरल (भिडियो सहित)
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह लकडाउनमा छाेरीहरूसँग टिकटकमा नाचेर रमाउँदै गरेकाे अर्काे भिडियो भाइरल (भिडियो सहित)
admin June 9, 2020 June 9, 2020 भिडियो, मनोरञ्जन 0
काठमाडाैं, २७ जेठ ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि लगातार जारी राखेको लकडाउनले गर्दा धेरै नेपालीहरु सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । सोसल मिडियामा नै नचलाउनेहरु पनि यससँग जोडिएका छन् । घरभित्र नै थुनिएका धेरै मानिसहरु टिकटकसँग जोडिएको पाइन्छ । लकडाउनको समयमा पुराना हस्ती कलाकारहरुसमेत टिकटकमा देखिएका छन् । वरिष्ट कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ, गौरी मल्ल लगायत धेरैलाई टिकटकमा अभिनय गर्दै गरेको देख्न पाइन्छ ।
टिकटक अहिलेका युवा पुस्ता धेरै रूचाइएकाे सामाजिक सञ्जाल हाे । उनीहरू टिकटक भिडियो बनाएर रमाइलो गर्ने गर्छन् । टिकटक अभिनयका कारण कति त कलाकार भएर चलचित्रमा समेत अभियनय गर्न मौका पाएका छन् ।
यसैबीच पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह पनि सामाजिक सञ्जालमा टिकटकमा निकै सक्रिय हुन थालेकी छन् । पछिल्लाे समय उनी सामाजिक सञ्जालमा एकाएक चर्चामा आएकी छन् । उनको टिकटक एकपछि अर्को लगातार भाइरल बन्दै गएको छ ।
हिमानीले छोरीद्वय पूर्णिका राज्य लक्ष्मी शाह र कृतिका राज्य लक्ष्मी शाहसँग टिकटककामा गरेकी अभिनय अहिले भाइरल बन्दै गएकाे पाइन्छ ।छोरीहरुलाई भेट्न थाइल्यान्ड पुगेकी र लकडाउनका कारण अहिले उतै अड्किएकी हिमानीकाे अहिले अर्को देशभक्तिपूर्ण टिकटक भिडियो भाइरल बन्दै गएकाे छ । उक्त भिडियोमा ‘यो मन त मेरो नेपाली हो’ बोलको गीतमा उनी आफ्नी छोरीसंगै नाच्दै गरेको देख्न सकिन्छ ।
‘गुराँसको फेदमुनि सम्झनाको छाँया, जहाँ गए किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया’ बोलको गीतमा हिमानीले दुई छोरी पूर्णिका र कृतिकासँग नृत्य गरेकी भिडियो पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त दैनिकीकमा आफूलाई कसरी खुसी र स्वस्थ रहन सकिन्छ भन्ने हिमानी शाहबाट सिक्न सकिने भन्दै धेरैले उहाँहरुको टिकटक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमित बोकेको एम्बुलेन्स दुर्घटना
यसपालीकाे होली! सिउदो हाल्ने, डेटिङ्ग बस्ने देखि हात हालाहाल गर्नेहर सम्मको ! भिडियो हेर्नुहोस्
भिषण वर्षाले मच्चायो २७ जनाको ज्यान लिने गरि यस्तो वितण्डा (भिडियो हेर्नुस्)
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित)